Archive du 20170404
Manohana adverseran-dRajao Nosamborina i Claudine A&C
Ny tantara dia mbola mitohy ! Nosamborin�ny Birao Mahaleotena miady amin�ny kolikoly teny Mahamasina omaly tolakandro Razaimamonjy Claudine, ilay mpandraharaha vavy tompon�ny hotely A&C eny Ivato ary malaza ho olona akaiky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Depiote Nina -Mapar � Aza mikitikitika Ben�ny tan�na ! �
Mbola naverin�ny depiote Mapar lany tao Mahajanga Rahantanirina Nina ihany omaly fa ny voalavo sasa-miaina no misintona volombavan-tsaka, raha naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaha iainan�ny Ben�ny tan�nan�i Mahajanga ankehitriny, Mokhtar Salim Andriatomanga, ny tenany.
Honor� Rakotomanana Nanazava ny momba ilay �Fanilo miampita�
� Hatraiza no mety ho fampiharana ny fanilo miampita mba tsy ho lasa fanadino ? �. Io no lohatenin�ny velan-kevitra teo anivon�ny Akademiam-pirenena Malagasy natao tetsy Tsimbazaza niaraka tamin�ny filohan�ny antenimierandoholona ny sabotsy teo.
Ben�ny tan�na amin�ny tan�n-dehibe Tsy hikoso-maso amin�ny HVM ?
Tsy tokony horaisin�ny fanjakana fahavalo ireo ben�ny tan�na tsy mitovy firehana amin�ny antokon�ny fitondrana, hoy ny ben�ny tan�nan�Antsiranana Dajavojozara Jean Luc D�sir�
Gadra politika Mitsipaka ny hisamborana an-dRavalomanana
Na dia nampigadra ny tenako aza ny fitondrana Ravalomanana dia fitsipaham-pitokisana ny fandraisanay gadra politika ny fisamboran�izao fitondrana izao azy, hoy ny filohan�ny fikambanan�ireo gadra politika, Henri Rakotomalala na Riribe.
Ekipan-dRajaonarimampianina Raikitra amin�izay ny rombo
Tsy voafehy intsony ny tandapa sy ny olona akaikin�ny filoha fa samy manao izay saim-patany. Samy tompon�ny afera rahateo ka manomboka mifampialona tanteraka.
Tratry ny aloka ihany !
Tena gaga indray aho ry Jeanne naheno iny seranareo omaly hariva iny a ! Fa dia inona loatra no tsy nifankahazoana tao ?
Tamberin�andraikitra Tsy afa-misaraka amin�ny fahaizana lal�na
Tsy tonga saina mihitsy amin�ny maha tompon�ny fahefana feno azy ny Malagasy.
Vono olona etsy sy eroa Efa tsy voafehy intsony
Mahavalalanina ny zava-misy eto amin�ny firenena. Mbola tany misy lal�na ve eto Madagasikara sa efa tena fanjakan-jiolahy mihitsy no mihatra sy tiana hampiharina eto ?
Mpiasan'ny minisiteran'ny vola Nanome 10 tapitrisa Ar ho an'Antsakabary
Tsy adinon�ireo mpiasan�ny minisiteran�ny fitantanam-bola sy ny tetibola ireo traboina ao Antsakabary, distrikan�i Befandriana Avaratra izay may trano ny volana martsa lasa teo.
Miherina tokoa ny taona ary efa nitelina volana 3 sahady izy izay. In-4 nisondrotra sahady anefa ny vidin-tsolika izay iankinan�ny fampandehanam-piharian�ny sarambabem-bahoaka.
Vehivavy maty niteraka tao Befelatanana Voasaringotra ireo mpianatra ho dokotera 4
Niakatra Fitsarana omaly tetsy amin�ny tribonaly Anosy ilay raharaha nahafatesana vehivavy bevohoka tao amin�ny hopitaly Befelatanana, roa volana lasa izay.
NY AMPINGA Mpampianatra mpikabary am-polony no notolorana mari-pahaizana
Mba hahafahana mampitovy ny rafitry ny kabary eto Madagasikara dia mpampianatra mpikabary am-polony maro no niatrika fiofanana manokana ary notolorana ny mari-pahaizana avy amin�ny minisiteran�ny kolontsaina ny faran�ny herinandro teo.
Horonantsary GISA MAINTY Hanatsikafona ny paikady maloton�ireo mpanao politika
Miroso hatrany amin�ny famokarana horonantsary mahaliana ny mpankafy ny tranom-pamokarana Scoop digital amin�izao fotoana izao. Raha ny resa-politika no tena malaza ankehitriny dia tsy tara izy ireo.